Hindiya Waxay Soo Bandhigtay Taariikhda Ellicott Ee Xakamaynta Fatahaadda iyo Shaqada Dekadda
Hindiya Oo Soo Bandhigtay Taariikhda Ellicott ee Xakamaynta Fatahaadda iyo Shaqada Dekadda (1961)
Hagaajinta iyo horumarinta wabi yar oo ku yaal Dekedaha Yar ee Hindiya, taas oo si weyn u saameyn doonta horumarka guud ee qaranka ee dhaqaalaha waxaa fulinaya dhowr ceel oo Ellicott ah.
Laba ka mid ah unugyadan, oo ah 12-inji oo ah noocyo dhuumaha hawo-soo-saarka ee Ellicott ee fasalka la qaadi karo "DRAGON", ayaa waxaa iibsaday dowladda Jammu iyo Kashmir. Waa in lagu dabaqaa mashruuca xakamaynta fatahaada wabiga Jehlum.
Marinkan biyo mareenka ah, ee mara Dooxada Srinigar ee Kashmir, ayaa daadad ku haya meelaha beeraha ku teedsan sannad kasta, isaga oo maydha dalagyada muhiimka ah isla markaana dad badan ka dhigaya guri la’aan. Daadadka waxaa sababa kor u qaadista, sanadaha, heerka sariirta webiga taasoo ka dhigaysa Jehlum awood uma laha inuu maareeyo mugga ugu badan ee biyaha ku qulqulaya guga kasta marka barafka ku hareeraysan Himalayas uu dhalaaliyo. Xaaladdaan waxaa sii xumeynaya dhowr wabiyaal oo qaada biyo baraf dheeri ah oo ka soo baxa buuraha ku dhow Jehlum.
Wadahadalka qandaraaska waxaa dhameystiray wakiilka idman ee Ellicott Blackwood Hodge (India) Pvt. Ltd. iyo "DRAGONS," waxaa qayb ahaan ka soo saaray Hindiya shirkadda Ellicott ee shatiga leh, Shirkadda Hooghly Docking iyo Engineering ee Howrah. Waxaa loo dejiyay hawlgal si ay u ballaadhiyaan una sii qoto dheeraadaan kanaalka daadadka ee 17 mayl illaa ballaca sariirta oo ah 400-450 fuudh iyo qoto dheer oo ilaa 22 fuudh ka hooseysa qashin biyo sare. Qodaalka wabigan, oo lagu qiyaasay inuu qaadi karo biyaha barafka dhalaalaya ee xilliyada, ayaa ku lug yeelan doona ka saarista inta u dhexeysa 8 iyo 10 milyan oo dhudhun oo dhudhun ah oo adag, oo ku kala duwan nooc ka mid ah ciidda webiga ee adag illaa dhoobada la shiiday iyo quruurux yaryar
Labada gododba hadda way shaqeynayaan. Shaqadii ugu horaysay waxay bilaabatay kadib xafladihii hawlgalinta ee lagu sharfay joogitaanka Ra'iisul Wasaaraha Jawaharlal Nehru. Waxay leeyihiin qoto dheer qodis ah 26 fuudh, soosaarka ugu badan ee qiyaastii 250 yari cubic saacaddiiba waxayna ku dhex mari karaan dhuumaha oo dhererkoodu dhan yahay illaa 3,000 fiit.
Hantida loo qaadi karo, oo ay caymis ku tahay qaybtooda dhisme u dhigma, ayaa faa'iido u noqotay gaarsiintooda. Maaddaama aysan jirin wax xiriir tareen ah oo laga helay Pathankote illaa goobta qodidda ee Buramulla, oo u dhow Srinigar, Kashmir's capitol, waxaa lagama maarmaan noqotay in lagu geeyo gaari xamuul ah oo 300km ka badan oo waddooyinka buuraha dhaadheer leh. Jidadka cidhiidhiga ah iyo buundooyinka waa in lagu tixgeliyaa miisaanka guud iyo ballacyada rarka xamuulka. Si kastaba ha noqotee, naqshadaha loo qoondeeyay ceelashu waxay awood u siisay dhibaatooyinka gaadiidka in la daboolo iyo qod qodista sabeynta si loogu qanciyo goobta shaqada.
Mashruucyada Dekadaha Yar-yar
Horumarka labaad ee weyn ee ku lug leh ceelasha Ellicott waa hagaajinta tiro ka mid ah Dekedaha Yar ee ku yaal xeebaha Hindiya iyo xeebta galbeed, waxtarkooda oo ay xaddiday tuubbada sandbare ee quusinaysa iyo candhuufta meelaha laga galo dekedda. Si looga gudbo caqabadahan socdaalka, laba 22-inji oo ah Ellicott oo loogu talagalay iskeed u shaqeysato, marin biyoodka hawo-biyoodka ee koronto qayb ahaan-koronto ayaa la amray. Sidoo kale in qayb ahaan lagu soo saaro Hindiya "Hooghly," qandaraaska iyaga ayaa dhawaan la kala saxeexday Ellicott iyo Indian Supply Mission ee Washington.
Labadan qaybood waxay sameysmi doonaan xudunta barkad qodan oo ay dhistay dowladda Hindiya, Wasaaradda Gaadiidka waxayna saldhigeedu noqon doontaa dekedaha Bombay iyo Visakhaptnam. Sababtoo ah qodaalka looga baahan yahay badda furan, sandbarska iyo dariiqyada laga soo galo ee soo ifbaxa iyaga ayaa si gaar ah loogu qaabeeyey bad-u-socosho iyo is-riix riix.
Dekedaha Yar, oo ku teedsan xeebta 3,000 mayl ee Hindiya, waxay qabtaan malaayiin tan oo xamuul ah sanadkiiba oo ay ku jiraan dhoofinta muhiimka ah ee macdanta birta heerka sare ah, manganese, shaaha, cudbiga, cusbada, bauxite, hargaha iyo mikiya. Qodista dayactirka joogtada ah si loogu oggolaado maraakiibta diyaarka u ah inay galaan dekedda si ay u rartaan alaabada dhoofinta ayaa muhiimad weyn u leh sii socoshada iyo ballaarinta ganacsiga caalamiga ah ee Hindiya. Daadadkani waxay gacan ka geysan doonaan xagga maadiga si loo gaaro ujeeddadan.